वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने निर्णय प्रमाणीकरणमा शंका | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अब काठमाडौंको ढलबाट पनि बिजुली !
आईपीएल अक्सन : सन्दिप दिल्लीबाट खेल्ने →
वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने निर्णय प्रमाणीकरणमा शंका
Posted on 28/01/2018 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं : सरकारले कुनै गृहकार्यबिना कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवामा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णयले कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाइएपछि निर्णयको ४ दिन बित्दा पनि निर्णय प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । विधि, पद्धति र नियमसंगत नभएकाले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी अनिच्छुक देखिएका छन् ।
‘विधि र पद्धतिअनुरूप नभएकाले मुख्यसचिव रेग्मी निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । कार्यालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म निर्णय प्रमाणीकरण भएको छैन । सो प्रस्ताव आउनुअघि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न बनाइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ पनि अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपथ्र्यो । दुवै महत्वपूर्ण प्रक्रिया नपुर्‍याई ठाडो प्रस्तावमा निर्णय भएको भन्दै मुख्यसचिव रेग्मीले कानुनी उल्झन देखाउँदै निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेका हुन् । सुशासन ऐन २०६४ ले पनि नियमविपरीतका र अंग नपुगेका प्रस्ताव फिर्ता गर्नसक्ने अधिकार मुख्यसचिवलाई दिएको छ ।
सामान्यतया सरकारले गरेका सबै निर्णय २४ घण्टाभित्र प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले गत बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर ठाडो प्रस्तावका आधारमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्षमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा झार्ने सरकारको निर्णय शुक्रबार अबेरसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयबाट विधिवत प्रस्ताव गएको र निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएको औपचारिक जानकारी मलाई छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कामचलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आएसँगै स्थानीयलाई अहिले पुरानो सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न रकम अभाव भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले ७० वर्ष उमेर समूहकालाई भत्ता वितरण गर्न अहिले नै १ अर्ब रुपैयाँ अभाव भइसकेको जानकारी दिए । उनले चाल्ु आवको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब र बाँकी ६ महिनामा थप १ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने बताए । प्रवक्ता तामाङका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि चालु आवमा विनियोजित ३६ अर्बमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने देखिएको हो ।
‘अहिलेकै सिस्टममा भत्ता वितरण गर्न बर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अभाव हुन थालेको छ भने ६५ वर्षकालाई पनि भत्ता दिँदा कति रकम नपुग्ला अनुमान गर्नै कठिन छ’, प्रवक्ता तामाङले भने । उनले ६५ वर्षकालाई भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन भए सुरुमै थप १० अर्ब चाहिने, यो रकम बर्सेनि कैयौं प्रतिशत बढ्दै जाने र त्यसले देशको आर्थिक संकट विकराल हुन सक्ने आकलन गरिएको जानकारी दिए । वृद्धभत्तासम्बन्धी पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे भइरहेका बेला हचुवामा उमेर ६५ वर्ष झारिएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन् ।
कानुनतः देशलाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि अर्थतन्त्रले त्यो दायित्व वहन गर्न सक्ने नसक्ने विश्लेषण गनुपर्ने र यस्तो प्रस्ताव तयार गर्नुअघि अर्थसँग सहमति लिनुपर्छ । अर्थले औचित्य र पुष्ट्याईंसहित सहमति दिए मात्र सरकारका अन्य निकायले आर्थिक दायित्व बढ्ने त्यस्ता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सबै कानुनी प्रावधान मिचेर सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर घटाएको थियो । कानुनी प्रक्रिया र सुशासन ऐन २०६४ अनुसार अर्थको स्वीकृतिमा स्थानीयले औचित्य र पुष्ट्याईंसहित वृद्धभत्तासम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजानु पथ्र्यो तर सरकारले यसो गरेन । मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार नगरेकाले नै अर्थसँग स्वीकृति लिने कुरै नभएको प्रवक्ता तामाङले बताए । स्थानीयका अनुसार चालु आवमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनेको संख्या २३ लाख छ ।
निर्णय मन्त्रालयमा आएको जानकारी छैन, यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ
-रुद्रसिह तामाङ, प्रवक्ता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
निर्णय विधि र पद्धतिअनुसार गरिएको छैन । यसअघि पनि यस्ता निर्णय यसरी नै राजनीतिक रूपमा गरिन्थ्यो । त्यसैले अहिले समस्या आइरहेको छ । निर्णयका लागि प्रस्ताव बनेको र प्रमाणीकरण भएर आएको कुनै जानकारी छैन । चालु आवमा नै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा २ अर्ब रुपैयाँ अभाव देखिएको छ । हामीले तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको १८ करोड पनि अर्थले दिन सकेको छैन । अर्थमा अहिले रकम अभाव छ । हामीले पुरानै वृद्धभत्ता वितरण गर्न यस वर्ष नियमित बजेटमा थप २ अर्ब चाहिने निष्कर्ष निकालिसकेका छौं । अर्थले त्यही २ अर्ब विनियोजन गर्न पनि कठिन छ ।
यस्तो अवस्थामा भत्ता पाउने उमेर ६५ मा झारिएको छ । यसले भोलि विकराल स्थिति ल्याउने निश्चित छ । हामीले उमेर ६५ वर्ष नै भए सुरुमै १० अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रारम्भिक आकलन गरेका छौं । अहिले १८ करोड दिन नसकेको अर्थले १२ अर्ब कसरी देला ? नेपालीको औसत आयु लम्बिँदै गएको छ । भत्ता पाउने ६५ वर्ष भए भत्ता लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । वृद्धभत्ता दिने प्रणालीमा वैज्ञानिक सुधार आवश्यक देखिएको र विकल्प सोच्नुपर्ने बेलामा ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय देशको हितमा भएजस्तो लाग्दैन ।(अन्नपूर्ण )
पुराना पेजहरु महिना छान्नुहोस् जुन 2019 (61) मे 2019 (46) अप्रील 2019 (14) मार्च 2019 (21) फ्रेवुअरी 2019 (55) जनवरी 2019 (67) डिसेम्बर 2018 (71) नोभेम्बर 2018 (38) अक्टोबर 2018 (28) सेप्टेम्बर 2018 (55) अगस्ट 2018 (52) जुलाई 2018 (63) जुन 2018 (77) मे 2018 (72) अप्रील 2018 (73) मार्च 2018 (58) फ्रेवुअरी 2018 (60) जनवरी 2018 (64) डिसेम्बर 2017 (75) नोभेम्बर 2017 (74) अक्टोबर 2017 (73) सेप्टेम्बर 2017 (71) अगस्ट 2017 (85) जुलाई 2017 (87) जुन 2017 (72) मे 2017 (47) अप्रील 2017 (66) मार्च 2017 (55) फ्रेवुअरी 2017 (53) जनवरी 2017 (54) डिसेम्बर 2016 (43) नोभेम्बर 2016 (81) अक्टोबर 2016 (73) सेप्टेम्बर 2016 (88) अगस्ट 2016 (89) जुलाई 2016 (86) जुन 2016 (77) मे 2016 (83) अप्रील 2016 (88) मार्च 2016 (114) फ्रेवुअरी 2016 (110) जनवरी 2016 (85) डिसेम्बर 2015 (81) नोभेम्बर 2015 (76) अक्टोबर 2015 (94) सेप्टेम्बर 2015 (95) अगस्ट 2015 (97) जुलाई 2015 (93) जुन 2015 (92) मे 2015 (100) अप्रील 2015 (106) मार्च 2015 (99) फ्रेवुअरी 2015 (60) जनवरी 2015 (58) डिसेम्बर 2014 (96) नोभेम्बर 2014 (106) अक्टोबर 2014 (110) सेप्टेम्बर 2014 (103) अगस्ट 2014 (96) जुलाई 2014 (83) जुन 2014 (95) मे 2014 (89) अप्रील 2014 (110) मार्च 2014 (103) फ्रेवुअरी 2014 (96) जनवरी 2014 (109) डिसेम्बर 2013 (100) नोभेम्बर 2013 (90) अक्टोबर 2013 (105) सेप्टेम्बर 2013 (134) अगस्ट 2013 (117) जुलाई 2013 (125) जुन 2013 (110) मे 2013 (121) अप्रील 2013 (130) मार्च 2013 (121) फ्रेवुअरी 2013 (108) जनवरी 2013 (124) डिसेम्बर 2012 (122) नोभेम्बर 2012 (121) अक्टोबर 2012 (119) सेप्टेम्बर 2012 (142) अगस्ट 2012 (159) जुलाई 2012 (161) जुन 2012 (164) मे 2012 (187) अप्रील 2012 (148) मार्च 2012 (177) फ्रेवुअरी 2012 (123) जनवरी 2012 (111) डिसेम्बर 2011 (137) नोभेम्बर 2011 (164) अक्टोबर 2011 (176) सेप्टेम्बर 2011 (174) अगस्ट 2011 (202) जुलाई 2011 (179) जुन 2011 (199) मे 2011 (229) अप्रील 2011 (245) मार्च 2011 (279) फ्रेवुअरी 2011 (250) जनवरी 2011 (252) डिसेम्बर 2010 (183) नोभेम्बर 2010 (138) अक्टोबर 2010 (220) सेप्टेम्बर 2010 (253) अगस्ट 2010 (390) जुलाई 2010 (256) जुन 2010 (210) मे 2010 (220) अप्रील 2010 (166) मार्च 2010 (229) फ्रेवुअरी 2010 (131) जनवरी 2010 (207) डिसेम्बर 2009 (152) नोभेम्बर 2009 (141) अक्टोबर 2009 (103) सेप्टेम्बर 2009 (92) अगस्ट 2009 (157) जुलाई 2009 (130) जुन 2009 (89) मे 2009 (172) अप्रील 2009 (62) मार्च 2009 (50) फ्रेवुअरी 2009 (25) जनवरी 2009 (48) डिसेम्बर 2008 (77) नोभेम्बर 2008 (62) अक्टोबर 2008 (25) सेप्टेम्बर 2008 (21) अगस्ट 2008 (3) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2)
“२५ औं बिश्व आदिवासी दिवस तथा संगीतिक साँझ २०१९” कार्यक्रममा गायिका श्रेयसी चेम्जोङ र नेलिमा थापा मगर बहराईन आउँदै ।
कोमाका बिरामी ल्याउने विषय अध्ययनमै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ७ हजारको कामलाई ४८ हजार
साढे ३५ करोडमा जम्मा ३७३१ सीमास्तम्भ !
काभ्रेमा बम आतंक
कुमार पौडेल मुठभेडमै मारिएका हुन् : गृहमन्त्री थापा
विदेशबाट नेपालमा आएर मृत्यु भएका ११४ कामदारलाई ६ करोड क्षतिपूर्ति दिइने
किरात याक्थुङ चुम्लुङ कतारको दशौं अधिवेशन सम्पन्न
जनसम्पर्क समिति कुवेतको आयोजनाको जागरण अभियानको तयारी पुरा
"२५ औं बिश्व आदिवासी दिवस तथा संगीतिक साँझ २०१९" कार्यक्रममा गायिका श्रेयसी चेम्जोङ र नेलिमा थापा मगर बहराईन आउँदै ।
कुवेतमा मृत्यु भएकी झापाकी सुमित्राको परिवारलाइ सम्पर्कमा आउन दुताबासको आग्रह